နားကြပ်တပ်ပြီး သီချင်းနားထောင်လေ့ ရှိသူများ သိထားသင့်တဲ့ (၆၀-၆၀) စည်းမျည်းနှင့် မှတ်သားဖွယ်ရာတစ်ချို့ - Shwe Khit Online TV
HomeNewsနားကြပ်တပ်ပြီး သီချင်းနားထောင်လေ့ ရှိသူများ သိထားသင့်တဲ့ (၆၀-၆၀) စည်းမျည်းနှင့် မှတ်သားဖွယ်ရာတစ်ချို့
June 15, 2020 Bo Bo News 0
သင်က နားကြပ်နဲ့ တေးဂီတတွေကို နေ့စဉ်နားထောင်လေ့ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်လား ? ဒါမှမဟုတ် သင့်မှာ ဒီလိုနားထောင်တက်တဲ့ ကလေးမျိုးရှိသလား ? နားကြပ်နဲ့တေးဂီတတွေကိုနားထောင်ခြင်းက ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ စိတ်ငြိမ်သက်မှုခံစားရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ငယ်ရွယ်တဲ့ ဆယ်ကျော်သက်တွေက ဒီလိုနားမျိုး တေးသီချင်းတွေကို နားကြပ်နဲ့ ခံစားနားဆင်တက်ကြပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
ဒီလိုတစ်ချိန်လုံးနားကြပ်ကိုတပ်ဆင်ထားတာကြောင့် တစ်ခါတစ်ရံမှာ သူတို့တွေအနေနဲ့ အိမ်က လူကြီးမိဘတွေနဲ့ အခြားလူတွေရဲ့ မေးမြန်းပြောဆိုမှုကို မကြားနိုင်တာမျိုးဖြစ်တက်ကြပါတယ်။ ဒါကလတ်တလောမှာ ကြီးမားတဲ့ ပြဿနာမျိုးမဟုတ်ပေမယ့်လည်း ရေရှည်မှာ တကယ်အကြားအာရုံ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ သာဓကတွေရှိနေလို့ ကောင်းတဲ့ အလေ့အထတစ်ခုတော့ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သတိချပ်သင့်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
အထူးသဖြင့် ကလေးသူငယ်တွေ၊ ဆယ်ကျော်သက်တွေအနေနဲ့ နားကြပ်နဲ့ အချိန်ကြာမြင့်စွာ အသံအကျယ်ကြီးနားထောင်မယ်ဆိုရင် ရေရှည်မှာ အကြားအာရုံဆုံးရှုံးနိုင်တယ်လို့ နိုင်ငံတကာက အာရုံကြောဆရာဝန်တွေက သုတေသနမှတ်တမ်းတွေနဲ့ အသေအချာ သတိပေးထားပါတယ်။ စစ်တမ်းတွေအရဆိုရင်တော့ နားကြပ်တွေကို အသံကျယ်လောင်စွာ နဲ့ အချိန်အကြာကြီး အသုံးပြုတဲ့ ဆယ်ကျော်သက် (၅) ဦးမှာ (၁) ဦးက အကြားအာရုံဆုံးရှုံးရနိုင်ကြောင်း သိရပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
ဒါကနားကြပ်တွေအသုံးပြုတာ မကောင်းဘူးလို့ဆိုလိုတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။အဓိက က မြင့်မားတဲ့အသံနှုန်းတွေကို ရှောင်ရှားပြီး အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခု သတ်မှတ်ကာ မှန်မှန်ကန်ကန် အသုံးပြုဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ကတော့ တစ်နေ့မှာ အများဆုံး တစ်နာရီခန့်ပဲ နားကြပ်တွေကို တပ်ဆင်အသုံးပြုသင့်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားဖူးပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ကြေညာချက်တစ်ခုမှာလည်း အကြားအာရုံ ဆုံးရှုံးမှုအများဆုံး အသက်အပိုင်းအခြားက (၁၂) နှစ်မှ (၃၅) နှစ်အတွင်းရှိ လူငယ်နှင့် လူလတ်ပိုင်းများ ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ နောက်ပြီး အချက်အလက်တွေအရ အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ ဆယ်ကျော်သက် အားလုံးရဲ့ စုစုပေါင်း(၃.၅) ရာခိုင်နှုန်းသာ ကောင်းမွန်တဲ့ အကြားအာရုံရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါဟာအတော်လေးကို စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း (WHO) က ကလေးငယ်များအကြားအာရုံဆုံးရှုံးမှုကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် မိဘတွေအနေနဲ့ သူတို့ကို တစ်နေ့တစ်နာရီသာ နားကြပ်များအသုံးပြုဖို့နဲ့ အသံပမာဏကိုလည်း (၆၀) ရာခိုင်နှုန်းကနေ မတိုးမြှင့်ဖို့ ကြပ်မတ်ထားသင့်တယ်လို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
တကယ်တော့ နားကြပ်တွေကပဲ လူတစ်ဦးရဲ့အကြားအာရုံဆုံးရှုံးစေနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ သီချင်းသံစဉ်တွေကျယ်လောင်စွာဖွင့်တဲ့ ကလပ်လိုနေရာတွေနဲ့ ပွဲလမ်းသဘင်တွေ၊ မိုးချုန်းသံတွေ နဲ့ အခြားအသံကျယ်လောင်စွာ ထွက်ပေါ်နိုင်တဲ့ စက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေက လည်း အလားတူစွာ အကြားအာရုံ ကိုအနည်းနဲ့အများ ပျက်စီးချို့ယွင်းစေနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီလိုမျိုးနားကြပ်ကြောင့် မဟုတ်ဘဲ အခြားသောဆူညံသံတွေကြောင့် အကြားအာရုံချို့တဲ့သွားခြင်း ခေတ္တအကြားအာရုံဆုံးရှုံးခြင်းတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ရ တဲ့သူတွေလည်း အမြောက်အမြားရှိပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
အခုနောက်ပိုင်းထုတ်လုပ်တဲ့ အရည်သွေးမြင့်နားကြပ်တွေကတော့ အတော်လေးကိုကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့က ပတ်ဝန်းကျင်က ဆူညံသံတွေကို မကြားရလောက်အောင်လျော့ချပေးနိုင်လို့ သင့်အနေနဲ့ သီချင်းသံကို ကြားဖို့ အသံ Volume ကို ပမာဏအနည်းငယ်လောက်သာ လျော့ချထားနိုင်တာကြောင့်ပါ။ ဒါကြောင့် တက်နိုင်ရင်ဒီလို အရည်အသွေးမြင့်နားကြပ်တွေကို အသုံးပြုတာက မိမိနားကျန်းမာရေးအတွက် အများကြီးအထာက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ကလည်းနောက်ပိုင်းမှာ နားကြပ်ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကို ဒီလိုအရည်အသွေးမြင့် နားကြပ်တွေသာထုတ်လုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုတွေပြုလုပ်ထားပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
အချုပ်အားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ နားကြပ်ကို အများဆုံးအသံပမာဏ၏ (၆၀) ထက်ကျော်လွန်တဲ့ အသံပမာဏ အထိမဖွင့်သင့်ဘူးဆိုတာနဲ့ တစ်နေ့ကို မိနစ(၆၀) ထက်ကြာမြင့်အောင် နားမထောင်သင့်ဘူးဆိုတာကို အမြဲသတိပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကို (၆၀-၆၀) လို့ အလွယ်မှတ်သားထားနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း သုတေသနပြုလုပ်မှုတွေအရ တွေ့ရှိချက်တွေမှာတော့ Vitamin C လိုမျိုး Antioxidants ပါဝင်တဲ့ သစ်သီးတွေ၊ အစားအစာတွေက အကြားအာရုံဆုံးရှုံးမှုကနေ ကာကွယ်မှုပေးနိုင်တယ်လို့ သိရကြောင်း တင်ပြရင်းနဲ့ပဲ အဆုံးသတ်ပါရစေနော် …………… shwekhitonlinetv.com
ရာသီဥတုတွေ ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်သောအခါ ဖြစ်လာသော ဆိုးကျိုးများ
တော်ရုံလူတွေ သတိမထားမိလောက်အောင် တည်ဆောက်ထားတဲ့ လျှို့ဝှက် အိမ်များ